Feno folo taona i Caliber anio | Ireo mpamaky rehetra
Folo taona ny kaliberaly androany
Joaquin Garcia | | fakan-tahaka toa, Software
Any, andro tsara iray, 31 Oktobra, tanora programmer iray antsoina hoe Kovid Goyal dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny kinovan'ny ebook manager voalohany. Ity kinova voalohany ity dia Caliber, programa malaza izay saika ny mpamaky rehetra izao no mampiasa amin'ny eReader.
Na izany aza, ny 31 Oktobra dia tsy tamin'ny 2016, lavitra azy fa 31 Oktobra 2006, izany hoe, 10 taona lasa izay. Androany tokoa no fitsingerenan'ny andro nahaterahana na tsara kokoa hoy ny tsingerintaonan'ny Caliber, iray amin'ireo fitaovana manan-danja indrindra misy raha ny momba ny fiasana amin'ny ebooks.
Saingy tsy tao an-tsainy ny mpamorona azy na nanantena akory aza fa Caliber no toetrany ankehitriny. Tsy vitan'ny nahavita nandresy ny olana natolony tamin'ny kinova voalohany fa koa manana loharanom-baovao marobe izay azony entina ao amin'ny eReader antsika ary koa mpanonta ebook izany dia tsy hamela antsika hanova ny ebooks fa hamorona azy ireo koa.
Izy io koa dia manana fanohanana haingana an'ireo eReaders amin'izao fotoana izao eny an-tsena ary indrindra ho an'ny mpamorona, Caliber dia tetikasa iray manome sakafo sy manampy ireo tetikasa Rindrambaiko Maimaimpoana hafa. Amin'ity tranga ity dia fantatsika izany Sigil dia novolavolaina niaraka tamin'ny fanampian'ny ekipa Caliber.
Mampalahelo fa ireo fandrosoana ireo dia tsy vita tao anatin'ny folo taona fa efa tao anatin'ny roa taona lasa, rehefa nahazo fanampiana avy amin'ireo mpamorona vaovao izay liana amin'ny fiasan'ny Caliber i Kovid Goyal. Amin'izao fotoana izao ny fivoarana dia avoaka isan-kerinandro, zoma ka hatramin'ny zoma Ary isaky ny misy dikanteny mivoaka, ireo rafitra miasa lehibe dia manavao ihany koa ny kinalan'izy ireo, indrindra ny fizarana Gnu / Linux izay manana Caliber ao amin'ny toerana anaovany izany.
Soa ihany, ny Caliber dia manohy manintona kokoa hatrany hampiasaina, hany ka misy ankehitriny ireo fitaovana mamela antsika hanova ny solosainantsika ho mpizara ebook ho an'ny eReader rehetra, zavatra tena mahaliana Tsy mieritreritra ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Software » Folo taona ny kaliberaly androany
Rafa VR dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara, azo antoka fa mbola mamaha olana ny kaliberaly.
Manararaotra miteny aho fa efa manana mpampangorona vaovao isika izay tsy misy afaka manivana amin'ny alàlan'ny fifidianana ratsy, ary miaraka amina endrika tena tsara dia antsoina hoe mediatize.info.
Valio Rafa VR
Manararaotra miteny aho fa efa misy mpampangorona vaovao izay tsy misy olona afaka manao sivana amin'ny alàlan'ny fifidianana ratsy, ary miaraka amina endrika tena tsara dia antsoina hoe Mediatize.
Raha atao amin'ny lafiny sasany dia tsara kokoa ny Caliber noho ny hevitra rehetra azo raisina momba azy. Ohatra iray amin'ny rindrambaiko maimaimpoana.
Misaotra betsaka Kovid Goyal!
knsino dia hoy izy:
Ny fantatry ny olona vitsivitsy, ankoatry ny antony hafa tsy anaovan'ny Kovid Goyal dokambarotra azy, dia ny fananany Patreon manana lamina marobe mampihomehy ... Somary mampalahelo noho ny fampiharana iray tena ilaina ho an'ny olona marobe ary tsy misy tokony hotononina.
Valiny tamin'i Knsino
Tetika 5 hahazoana tombony betsaka amin'ny Kindle anao, na maodely inona na inona
iReader 2 na iReader Plus, iray amin'ireo eReaders malaza indrindra amin'ny Sinoa